BOUGAINVILLEA: KORAAN OO DARYEEL SI HABOON - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Bougainvillea: sifooyinka beeraha iyo daryeelka ee dhirta gudaha
Bougainvillea (Bougainvillea) - dhirta caanka ah ee qoyska Niktaginovye, ayaa noo yimid from South America. Fidiyay sababtoo ah muddada ubax dheer iyo qurxinta qurxinta aad u fiican.
Bougainvillea - ma aha warshad aad u dheer, sidaas darteed, sii kordhaya iyo daryeelidda iyada oo hoos ciidda growers novice.
Ma taqaanaa? Ubaxa waxaa loo magacaabay safiirka Faransiiska Louis Antoine de Bougainville, oo dhirta u keenay Europe.
Bougainvillea: sharaxaadda dhirta
Muuqaalka dabeecadda ah ee bougainvillea waa in geedkaani, iyadoo ku xiran manjooyin, waxaa loo samayn karaa labadaba sida geed iyo sida geed canab ah ama geed geed ah.
Waxay leedahay naadir, laakiin qodaxyo fiiqan iyo caleemo-qaabeeya oo leh calaamad u taagan. Ubax oo cabbir yar, midab caano ah, oo ku wareegsan xayawaanka midabada kala duwan, taas oo ku xiran noocyada kala duwan (guduud, cas, casaan, miro, iwm.).
Doorashada meel loogu talagalay guryaha bougainvillea
Meesha ugu fiican ee ubaxa ah bougainvillea waxay noqonaysaa dariishado koonfurta iyo dhinaca galbeed ee guriga ama aqalka.
Xilliga diiran, dheriga waa in la qaadaa waqti ka waqti hawo cusub si ay dhirta u hesho qadar dheeraad ah iftiinka iyo hawada cusub.
Si kastaba ha ahaatee, qorraxda tooska ah ee caleemaha waxay sababi kartaa gubasho, sidaas darteed maalmaha xagaaga kulul waxaa lagula talinayaa in la xiirto ubaxa.
Halabuurka ciidda ee warshadda
Dukaamada khaaska ah, waxaad ka iibsan kartaa isku dar guud oo loogu talagalay dhirta ubaxyada ama adiga nafsadaada. Halabuurka ciidda loogu talagalay bougainvillea waa in lagu daraa marka loo siman yahay:
Si nidaamka xididka si caadi ah u horumariyo, dhulka bougainvillea waa in lagu shubaa weelal qoto dheer.
Heerkulka ugu fiican ee ubaxa bougainvillea wuxuu noqon doonaa 22-30 ° C, iyo xilliga nasashada waxay noqon doontaa 4-7 ° C.
Inta lagu jiro hoos u dhaca xilliyeedka heerkulka, dhirtu waxay daadin doontaa caleemo. Cagaarka cusub ayaa soo bixi doona guga hore.
Waa muhiim! Heerka ka hooseeya 4 ° C, bougainvillea ayaa dhinto.
Goobidda iyo dib u boog bougainvillea
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo ubax waa bartam-guga. Bougainvillea Homemade waxaa lagu beeray dheriyo of 1.5-5 l.
Dhirta yaryar waxaa la isku shubay labadii sanaba mar, da'da - sida loo baahdo, 3-5 sano oo kasta. Xagga hoose ee taangiga waxaa lagama maarmaan ah lakabka lafdhabarta, oo ka kooban dhoobo ballaaran, dhagaxyada yaryar, shixnado, iyo wax yar oo ciid ah oo cusub.
Geedka loo baahan yahay bedelida dhererkeedu wuxuu si fiican u waraabiyaa, si taxaddar leh u qaadatay qoryaha dhoobo dhoobo, iyo haynta ubaxyada sare, waxaa loo wareejiyaa dher cusub. Ka dibna carrada waxaa lagu daraa weelka oo waxoogaa yareynaya.
Masaafada u dhexeysa xididada iyo derbiyada dheriga waa inay ahaadaan ugu yaraan 2-3 cm.
Waa muhiim! Si dhirta loo dhajiyo si dhakhso ah ka dib markii lagu tallaalay, waa in la tagaa dhowr maalmood iyada oo aan la waraabin, ee hooska.
Sida loo daryeelo bougainvillea
Daryeelka Ubadka Bougainvillea ee guriga waxaa ka mid ah waraabinta, manjooyin iyo bacarimiso.
Xilliga xagaaga, bougainvillea waxay u baahan tahay in la waraabiyo 1-2 jeer toddobaadkii. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in aysan jirin qoyaan dabacsan. Biyaha ka soo dhererka dheriga waa in la miiray, haddii kale xididdadu waxay bilaabi doonaan inay qudhuntaan.
Xilliga jiilaalka, waa ku filan in ciidda qoyaan hal mar labadii todobaadba si looga fogaado qalajinta. Hooska heerkulka qolka, qoyaan yar ayaa looga baahan yahay geedka. Haddii bougainvillea ay hoos u dhigtay caleemaha, ka dibna waraabinta waa la wada joojinayaa.
Abuuritaanka iyo gooyo bougainvillea
Si aad u gooyso bougainvillea guriga waa adag tahay.
Dayrta goor dambe - caleemaha hore ee xilliga qaboobaha ayaa yaraaday. Guga, dhismaha bougainvillea ayaa sii socota.
Si si habboon loo gooyo bougainvillea, ka hor inta aanad shaqeynin, waxaa si taxaddar leh loo baaraa. Waxaa lagama maarmaan ah in la soo saaro caleemo burbursan, oo cidhiidhi ah, oo aan ciriiri lahayn.
Xilliga xagaaga, isla markiiba ka dib ubax, waxaa haboon in la jarjiro laamaha dhalinyarada, taas oo dardar-gelin doona dhismaha ubaxyo cusub.
Bougainvillea si habboon u gooyaa waxay noqon kartaa, tegaayo laamihii ka weynaa 3-4 sano, maadaama ay ku dhow yihiin burooyinkooda oo aysan ku koraan caleemaha dhinaca.
Iyada oo la jarayo habboon, bougainvillea waxaa loo qaabayn karaa sida qaansiir, qalbi, iyo tirooyin kale.
Laga bilaabo gu'ga ilaa dayrta, bougainvillea waxaa la quudin karaa 10-14 maalmood. Isla mar ahaantaana, waxaa lagu talinayaa in la beddelo bacriminta organic leh waxyaabaha macdanta adag. Si kastaba ha ahaatee, waa in la ogaadaa in leh xad-dhaaf ah nitrogen, caleemaha lateral koraan si firfircoon, iyo formation of ubaxu hoos u.
Sidaa darteed, inta lagu guda jiro muddada ubax, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo Bacriminta leh farqiga potassium iyo fosfooraska. Inta lagu jiro xilliga nasashada, geedka uma baahna quudinta.
Taageerada Bougainvillea Stem
Bougainvillea stems waxay u baahan tahay taageero si ay u sii wadaan miisaankooda. Ubaxyada waaweyn waxay u baahan yihiin bamboo ama taageero silig, dhirta dhalinyaradu waxay yeelan doonaan buro ku filan. Waxay ku xayiran tahay kala badh, oo ku duuban xagasha qumman oo ku dhegay ciidda saldhigga ubaxa.
Ku dhajinta bougainvillea guriga
Si loo dacaayado bougainvillea, sida caadiga ah, isticmaal habka abuurka, guntinta iyo gooynka hawada.
Ku dhalida bougainvillea laga bilaabo abuurka guriga ayaa u baahan waqti badan. First of dhan, waa in aad diyaariso ciidda, qaso peat iyo ciid in ay u siman yihiin is le'eg.
Seeds ka hor laga beerto waxaa lagu talinayaa in la qoyo dhowr saacadood kiciyaha kobcinta. Waxaa loo dhigaa qoto dheer oo qiyaastii 0.5 cm.Dhulitaanka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo heerkulka qolka 25-30 ° C iyo in lagu bixiyo kuleylka hoose ee taangiga.
Caleemaha waxay u baahan yihiin bacriminta marmarka ah ee biyaha iyo hawada. Haddii dhalmo dhacdo xilliga qaboobaha, waxaa lagama maarmaan ah in ay iftiimiso miraha leh nalalka dhaadheer. Haddii xaaladahaas la buuxiyo, caleemaha ayaa soo baxaya 2-3 bilood.
Beddel ahaan, waxaad dacaayin kartaa bougainvillea adigoo maareynaya hawada. Si arrintan loo sameeyo, mid ka mid ah caleemaha dheer wuxuu sameynayaa siddooyin yar oo jeexan. Laantu waa la jeexjeexay, meelaha googoyntu waxay ku xiran tahay dhulka dushiisa, oo markaa si fudud u rusheeyaa ciidda.
Muddo ka dib, caleemaha dhalinyarada ayaa bilaabi doona inay ka soo baxaan burooyinkooda. Ka dib markii laamuhu sii xoogaysto, waxaa laga goyn karaa geedkii hooyada oo loo beddelaa meel cusub.
Inta badan guriga bougainvillea ayaa faafin by jarida. Guga, waxaad isticmaali kartaa laamihii haray ka dib markii manjooyin, ee caleemaha xagaaga ujeedadaas waxaa si gaar ah loo gooyaa.
Dhaqdhaqaaqa 10 cm dheer, jeexitaan ayaa lagu sameeyaa hoostiisa, caleemaha hoose waa la saaraa oo la gooyaa kiciyaha kobaca. Taas ka dib, laanteeda waxaa la dhigayaa ciidda diyaarisay xagasha 45% oo ah 2-3aad internodes.
Dhex dhexaadinta si fiican u goynta goynta waxay noqon doontaa isku dar ah ciid, dhuxul iyo dhuxulo sphagnum. Heerkulka waa inuu ahaado qiyaastii 20-25 ° C. Sidoo kale waxay u baahan tahay iftiin dhexdhexaad ah iyo iftiin kala duwan. Waa inaad si joogto ah u buufisaa gooynta biyaha iyo hawada.
Ma taqaanaa? Dhirta ugu dhakhsaha badan waxay ku koraan geedo gaar ah oo leh qallayl.
Inta badan, geedka waxaa cidhiidhi ah cayayaanka sida caarada caarada, aphids, iyo mealybugs. Si looga hortago caabuqa, waa inaad si joogto ah u tirtirtaa boodhka caleemaha, iyo sidoo kale ka saar caleemaha la qalajiyey iyo inflorescences.
Marka cayayaanka la ogaado, qaybaha ay saameeyeen ee dhirta ayaa laga saaraa, daaweyn cayayaanka ku haboon ayaa loo isticmaalaa.
Qoyaanka joogtada ah ee xididada waxay horseedi karaan horumarinta cudurada fangas. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo nidaamka waraabinta iyo iska ilaali kor u qaadidda ciidda.
Bougainvillea leh daryeel habboon iyo dhalmo ayaa ku farxi doona ubax geedka.